What Is Religion? (from the Viewpoint of Psychology) – 1 | သင္ကာဘုန္းျမင့္-Thinker Bhone Myint
← Dr. Hla Myint
What Is Religion? (from the Viewpoint of Psychology) –2→
January 28, 2010 · 7:41 pm
What Is Religion? (from the Viewpoint of Psychology) – 1
ဘာသာရေးကို စိတ်ပညာရှုထောင့်မှ ကမ္ဘာကျော်ပညာရှင်များ ဖြစ်ကြသော ဆစ်ဂမန် ဖရိုဒ် (Sigmund Freud)၊ စီ. ဂျီ. ယန့် (C. G. Jung)၊ ဝီလျံမ် ဂျိမ်းစ် (William James)၊ အဲရစ် ဖရွမ်း (Erich Fromm)၊ ဂေါ်ဒွန် အောလ်ပေါ့တ် (Gordon Allport)၊ အေဘရာဟမ် မက်စ်လို (Abraham Maslow)နှင့် ဗစ်တာ ဖရန်ကယ် (Viktor Frankl)တို့ ဝေဖန်သုံးသပ်ကြပုံကို အနှစ်ချုပ် မိတ်ဆက်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဂျိမ်းစ် ဖော့်ဆ်သ် (James Forsyth) ၏ “ဘာသာရေးဆိုင်ရာ စိတ်ပညာ သီအိုရီများ” (Psychological Theories of Religion) ကို အဓိကပြု ရေးသားပါသည်။ စိတ်ပညာနှင့် ဒဿနိက အခြေခံရေးရေးမျှ မရှိသူများအဖို့ နားလည်လိမ့်မည်ဟု အာမ မခံပါ။ (သင်ကာ)
ဆစ်ဂမန် ဖရိုက်ဒ် (Sigmund Freud 1856-1939) – ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်ဆိုသည်မှာ ဖခင်အပေါ် တမ်းတစွဲလမ်းမှု (longing for the father) တွင် အခြေပြုသော မှားယွင်းခံယူချက်ဖြစ်သည်။ မေတ္တာကို ခံယူလိုမှု၊ ကြီးမြောက်သည့် အရွယ်မှာပင် အကာအကွယ် ရလိုမှုတို့ ဖြစ်သည်။ ထိုအချက်တို့သည် ဘုရားသခင်ဆိုင်ရာ ကိစ္စအဖြစ် အပေါ်ယံသို့ ထိုးထွက်လာသည်။ ဘာသာရေးခံယူဆောက်တည်ခြင်းနှင့် ဓလေ့ထုံးတမ်းများမှာ စိတ်စွဲ (Obsessional) ဥပဒါန် (Neurosis) တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ယင်းသည် တစ်စုံတစ်ယောက်၏ လူသားဖခင်နေရာကို ဂေါ့ဒ်အား ကိတ္တိမဖခင်အဖြစ် သွတ်သွင်းသည့် ဒွိဟ ခံစားမှုများတွင် အမြစ်တည်သည်။
ကားလ် ဂုစတက်ဖ် ယန့် (Karl Gustav Jung 1875-1961) – အထွဋ်အမြတ်ဖြစ်သော၊ အနန္တဝိညာဉ်တော်ဖြစ်သော၊ မသိနိုင်သောဟု ဆိုရမည့် ဂေါ့ဒ် (God) (တနည်းအားဖြင့်) နတ်ဘုရား (Numinosum) ဆိုင်ရာအတွက် သတိကြီးစွာ (careful) နှင့် စေ့စပ်သေချာစွာ အလစ်အလပ်မရှိ (scrupulous) အလေးအမြတ်ထားခြင်းကို ဘာသာရေးဟု ခေါ်သည်။ ဤအရာအားလုံးကို “ပြောင်းလဲဖြစ်ပျက်နေသော တည်ရှိမှု (dynamic existence) သို့မဟုတ် သက်ရောက်မှု (effect) ဖြစ်သည်၊ ဆန္ဒအမှူးပြုသော အတ္တနောမတိ (arbitrary) အားဖြင့် အကြောင်းရင်းရှိမှု မဟုတ်၊ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် ဖန်ဆင်းသူထက် ဖန်ဆင်းခံရသူသာ အမြဲ ဖြစ်ရလေ့ရှိသော အပြုခံလူသားကို ဖိထားခြင်း (seize)၊ ထိန်းချုပ်ထားခြင်း (control)” ဟု ဖော်ပြနိုင်သည်။
ဝီလျံမ် ဂျိမ်းစ် (Willim James 1842-1910) – ဘာသာရေးဆိုသည်မှာ “လောကုတ္တရာရေးရာတွင် နတ်ဘုရားအပေါ် ထင်မြင်ထားသမျှနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့ဖာသာ ရပ်တည်လက်ခံထားသမျှသော လူသားတစ်ဦးစီ၏ ခံစားမှု (ဝေဒနာ)၊ အပြုအမှု (ကမ္မ)နှင့် အတွေ့အကြုံ (ပဋိပတ္တိ)” ဖြစ်သည်။
အဲရစ်ချ် ဖရွမ်း (Erich Fromm 1900-1980) – ဘာသာရေးဆိုသည်မှာ “လူသားအုပ်စုတစ်ခုအတွင်း မျှဝေလက်ခံထားသော အတွေးအခေါ်နှင့် အပြုအမူ စနစ်တစ်ခုခု။ ထိုစနစ်က လူသားတစ်ဦးစီကို သက်ဝင်ယုံကြည်စရာ သဒ္ဓါတရားနှင့် အသင်းအပင်းဖြစ်စေခြင်းငှာ ပြုအပ်သော ဇာတ်သွင်းရေး ကန့်သတ်ချက်တို့ကို ပြုလုပ်ထားသည်”
2 responses to “What Is Religion? (from the Viewpoint of Psychology) – 1”
how about religion as the “opium of the mass” 🙂 🙂